Kordhi taraafikada - 25 Istaraatijiyadood oo la caddeeyey si ay u koraan
Khamiista, Sebtember 15, 2011 Axad, Disembar 4, 2011 Douglas Karr
Kordhi taraafikada… waa erey aan maqlo marar badan. Maaha in aanan aaminsanahay kordhinta taraafikada, ee waa in marar badan suuqleyda ay si aad ah isugu dayayaan in ay kordhiyaan taraafikada oo ay iloobaan isku dayga ay ku kordhinayaan haynta ama u beddelka taraafikada ay horey u haysteen. Waa kuwan 25ka istiraatiijiyadood ee la xaqiijiyay ee aan ugu talagalin guryahayaga iyo macaamiisheenna si aan kor ugu qaadno taraafikada… una hubinno inay natiijooyin ku helayaan!
Siyaabaha Loo Kordhiyo Gaadiidka:
Ku hagaaji boggaaga matoorada search. Shaki la'aan, tani waa habka ugu fudud ee lagu kordhin karo taraafikada… waxaana ugu wanaagsan dhammaanba, waa taraafikada ku habboon ee adiga ku raadineysa! Fahmaan ereyada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ku isticmaasho adeegsadayaasha mashiinka raadinta adeegsanaya.
Isticmaal cinwaanada dareenka qabanaya. Ma ogtahay in dadku kaliya ay riixaan 20% cinwaanada ay akhriyaan? (Ma aanan sameynin ilaa aan aqriyay Vince Robisch's post). Waxaad si weyn u kordhin kartaa taraafikada adoo xoogga saaraya sida ugu badan cinwaankaaga sida waxyaabaha ku jira.
Adeegso ku qancin sharraxaadda meta bogaggaaga iyo qoraaladaada blog. Sharaxaadda Meta waxay noqon karaan cirifka helitaanka qiimaha sare ee riix-ka ee bogagga natiijada mashiinka raadinta, tani waxay ahayd istiraatiijiyad muhiim ah oo lagu kordhinayo taraafikada macaamiisheena.
Hubi higgaad iyo naxwaha. Qaar ka mid ah dadka waawayn waxay si dhab ah ugala socdaan higaada iyo naxwaha, iyagoo ka tagaya barta isla marka ay khalad arkaan. Waxaan dhawaan ogaaday CheckDog markii qof ii soo sheegay qalad higgaadinta ah laakiin aanan garanayn bog.
Bilow blog iyo si isdaba joog ah oo joogto ah. Inta badan ee aad wax qorto, fursadda ayaa ugu badan qof inuu helo waxyaabaha aad ka kooban tahay. Markasta oo aad si joogto ah iskula jaanqaadi karto, ayay dad badani u soo noqon doonaan si ay u helaan waxyaabo cusub
Ku maalgeli naqshadeynta kheyraadka. Naqshad wanaagsan ayaa soo jiidan doonta, naqshad xun ayaa macaamiisha iska celin doonta. Waxaa jira boggag badan oo waaweyn oo halkaa ku jira oo leh waxyaabo aan caadi aheyn oo aan si fudud u soo jiidanaynin dareenka maxaa yeelay waa wax iska cad oo fool xun. Naqshadaha waaweyni uma baahna inay kumanaan kaaga kacaan… waxaa jira goobo badan oo mawduucyo leh oo leh qaabab la yaab leh iyo bilic qurxin ka yar $ 20!
Ku dar aqoonsigaaga ama shaqaalahaaga bartaada. Dadku ma jecla inay akhriyaan qormooyinka suuqgeynta, waxay rabaan inay dareemaan inay akhriyaan fariin ka socota qof dhab ah. Dad badan ayaa soo jiidan doona bartaada ama balooggaaga dad badana ayaa ku laaban doona bartaada internetka markay ogaadaan inaysan la macaamilin qoraa wax qora oo aan la aqoon. Waxaan aad ugu talin lahaa isticmaalka Google Profiles iyo rel tags inaad sawirro geliso natiijooyinka raadintaada, sidoo kale!
Kudar cinwaanka jirka iyo lambarka taleefanka boggaaga. Mar labaad, qof qarinaya aqoonsigooda waxaa loo arkaa mid aan la aamini karin. Dadku ha ogaado sida ay kuu heli karaan… waxaana laga yaabaa inaad si la yaab leh ula yaabto booqashooyinka aad ku timaaddo markay kuu yimaadaan! Sidoo kale, ku darista cinwaan jireed bartaada waxay hagaajin kartaa fursadahaaga inaad ka hesho natiijooyinka raadinta maxalliga ah.
Ku biirid a Qaabka wareega ee bartaada ama bartaada internetka. Taleefannada casriga ah ayaa ku qarxay caan ka mid ah. Marka dadka isticmaala taleefannada casriga ahi ay arkaan inaad boggaaga ugu talagashay qalabkooda, way soo noqon doonaan. Kordhi taraafikada mobilada iyo guud ahaan taraafikada ayaa sidoo kale kordhin doonta sidoo kale!
Dhiirrigeli joogitaankaaga warbaahinta bulshada. Marka qof uu ku jeclaado ama ku raaco, waxaad hadda ku dartay booqde macquul ah shabakaddaada. Kobci shabakadaada waxaadna kori doontaa mugga taraafikada shabakadaada bulshada. Ka codso shabakadaada inay kugula xiriiraan si aad marba marka ka dambeysa ugu cusbooneysiiso waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Ku dar joornaal! Dad badan oo soo booqda ma heli doonaan waxa ay u baahan yihiin if laakiin haddii barta ama balooggu ay khuseeyaan, waxay kugula socon doonaan warbaahinta bulshada ama xitaa waxay ku biiri doonaan joornaalkaaga. Markaad dib ugu laabanto bartaada, warsidahaaga ayaa kordhin doona taraafikada isla markiiba. Suuq-geynta Emailka waxay leedahay soo celin aan caadi aheyn oo ku saabsan maalgashiga… iyo xitaa soo noqoshada wanaagsan ee taraafikada!
Kudar xiriiriyeyaal saxiixaaga kuna lifaaq email kasta oo baxa. Marna ma ogaan doontid waxa aad ku soo jiidaneyso dareenka qof… iyo sida iska cad, waxaad horeyba xiriir ula laheyd qofka aad email u direyso.
Isticmaal menus wax ku ool ah. Raadinta wax ku oolka ahi waxay ka dhigeysaa goobtaada mid sahlan oo la isticmaali karo waxayna sii celin doontaa taraafikada. Meeleynta caanka ah ee walxaha hagaha ayaa sidoo kale u oggolaan doonta makiinadaha raadinta inay ogaadaan waxa astaamaha muhiimka ah ay ku yaalliin bartaada.
Bixi qalabka is-dhexgalka sida kalkuleytarrada, sahan, iyo banaanbaxyo. Dadku wax uma akhriyaan sida aad u malaynayso… in badan ayaa si fudud u raadinaya aaladda saxda ah si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Xisaabiyaha weyn ee goobta ayaa dadka ka ilaalin doona soo noqnoqoshada.
Ka faa'iideyso sawirrada, jaantusyada iyo sawir-gacmeedka. Masawirka iyo jaantusyada kaliya kuma caawiyaan dadka inay fahmaan oo ay xasuustaan ​​macluumaadka, istaraatiijiyadaha sida infographics waxay sahlayaan in lala wadaago macluumaadkaas loona gudbiyo. Sidoo kale, inta badan baraha bulshada waxay ku darayaan aragtida muuqaalka sida Facebook.
Kor u qaad hoggaamiyeyaasha kale ee warshadaha iyo baloogyadooda. Sheegidda asxaabtaada ayaa ah hab fiican oo lagu soo jiito dareenkooda. Haddii mawduucaagu u qalmo, waxay la wadaagi doonaan dhagaystayaashooda. Qaar badan oo hogaamiyaashaas ka mid ah waxay leeyihiin dhagaystayaal aad u tiro badan. Badanaa, marka asxaabteyda i xuso, waxaan ku qasbanahay inaan labadaba faallo ka bixiyo boggooda oo aan la wadaago xiriirka bulsho ahaan dhagaystayaashayda. Haddii waxyaabaha ku jira ay yihiin wax aan caadi aheyn, waxaan u maleynayaa xitaa inaan la wadaagi doono qoraal ku saabsan. Taasi waxay abuureysaa xiriiriyeyaal dib uga noqda degelkeyga kuna socda toodii, xujo cusub oo loogu talagalay taraafikada inay maraan.
Kudar badhannada bulshada iyo qalabka calaamadeynta bulshada sida Twitter, Facebook, LinkedIn, Google iyo StumbleUpon si ay awood ugu yeeshaan ereyga afka. Tani waxay u oggolaaneysaa dhagaystayaashaada inay kugu dhiirrigeliyaan… bilaash .. dhagaystayaashooda! Caadi ahaan macnaheedu waa wax badan markii qof shabakaddaada ahi kugula taliyo waxyaabaha. Diirad saarista wadaagista bulshada ayaa soo saartay kororkii ugu weynaa ee taraafikada ee bartayadu waligeed arag.
Bixi dallacsiinta. Haddii aad dadaal ku bixisay boosteejo cajiib ah, maxaad u bixin weyday inaad horumariso? Haddii aad leedahay xiriiriyeyaal bulsheed bartaada sida aan sameyno, booqdayaasha qaarkood way ka xishoon doonaan markay arkaan 1 iyo 0 ee badhankaaga bulsheed. Waxaa jira shabakado waaweyn oo dadka ka mid ah si ay dib ugu daabacaan, u jecel yihiin +1 waxyaabahaaga wax yar ama wax yar.
Ku buuxi waxyaabaha hore. Sababta oo ah waxa ku jira ay duugoobeen, macnaheedu maahan inay waqtigoodii dhammaadeen. Iska ilaali inaad ku isticmaasho taariikhaha dhismaha URl iyo dhajinta maqaallada - waxaad dooneysaa inaad hubiso in dhagaystayaashaadu ay u maleynayaan inaad firfircoon tahay walina waxyaabahaagu wali ay khuseeyaan. Hal mar bishii, hubi waxyaabaha ku jira darajooyinka si fiican adoo adeegsanaya qalab sida Xeebaha oo dib-u-habeyn ugu samee cinwaanada bogga, waxyaabaha ku jira iyo xogta meta ee ereyada muhiimka ah ee ay ku kala sarreeyaan.
Tiro badan oo baabuur wadid ah tartamada, dallacsiinta iyo abaalmarinta sida PunchTab. Xeeladahaani had iyo jeer ma soo saaraan booqdayaasha ugu habboon, laakiin maxaa yeelay waxay abuuraan buuq iyo dhiirrigelin, waxaad haysan doontaa qaar ka mid ah taraafikada cusub.
Ha dhayalsan awoodda warbaahinta dhaqanka, gaar ahaan haddii aadan ka shaqeyn qaybta tikniyoolajiyadda. Hadalada ku saabsan warshadaha iyo joornaalada, bandhigyada ganacsiga, dammaanadda iibka, kaararka ganacsiga, xitaa qaansheegta… siinta dadka URL-ka shirkaddaada websaydhkeeda, baloogyada, iyo bogagga bulshada ayaa kordhin doonta taraafikada. Xiriirka dadweynaha dadku waxay xiriir la leeyihiin warshado waxayna leeyihiin waqti iyo karti ay sheekadaada ku soo bandhigaan… ma lihid. Qaar ka mid ah taraafikadayada ugu fiican waxay soo mareen saxafiyiin dhaqameed shirkadaha waaweyn ee warbaahinta kuwaasoo wax naga qoray ama na wareystay.
Ku qaybi mawduucaaga gudaha kooxaha warshadaha on LinkedIn iyo fagaarayaasha. Dadka qaarkiis waxay SPAM ka helaan kooxaha qaar, laakiin kuwa kale aad ayey u firfircoon yihiin - oo markay dadku arkaan inaad waxtar leedahay oo aad ogtahay alaabtaada, ugu dambayn waxay ku soo noqon doonaan boggaaga. Waxa kale oo laga yaabaa inay ka wada hadlaan wadahadalkaaga raadinta.
Sida kooxaha wershadaha ay gacan uga geystaan ​​kordhinta taraafikada, ayey sidoo kale caawisaa ka jawaabida su'aalaha la xiriira Su’aal iyo Jawaab goobaha. Qaar iyaga ka mid ah xitaa waxay kuu oggolaanayaan inaad tixraacdo isku xirnaanta jawaabahaaga. Bogagga su'aalaha iyo jawaabaha waxay ku qarxeen caan ahaan laakiin waxay umuuqdaan inay yara yaraadeen. Si kastaba ha noqotee, taasi waa halka dadku ay raadinayaan jawaabo - iyo haddii aad xiriir ku leedahay waxyaabahaaga ku saabsan su'aal weyn, waxay dib ugu laaban doonaan boggaaga.
Raadinta iyo kormeerka bulshada ereyada muhiimka ah ee lagu xusay doodaha boggaaga ama balooggaagu kaa caawin karo. Ma haysaa digniin loo diyaariyey magacyada tartamayaasha, magacyada wax soo saarka, ereyada furaha warshadaha? Dib u eegista kuwan joogtada ah waxay kuu soo bandhigeysaa dhagaystayaal badan oo soo booqdayaal ah. Waxay sidoo kale dhisi doontaa shabakadaada shaqsiyadeed iyo maamulka markaad bixinayso macluumaad qiimo leh.
Xiriirinta-baiting weli waa hab aad waxtar u leh kordhinta taraafikada. Sida laga soo xigtay Raadinta Wargeyska, 5 nooc oo maqaallo ah ayaa umuuqda inay abuurayaan gadaal badan gadaal iyo wax badan oo fayras ah. Waxay kala yihiin Wararka, kuwa liddi ku ah, Weerarka, Kheyraadka iyo kaftanka. Mawduucan blog-ka ah, tusaale ahaan, waa boostada kheyraadka.
Tags: kordhinta taraafikada
3, 2011 at 9: 19 PM
Sidaas ayaan ku raacsanahay. Uma istaagi karo “qorayaasha maaddooyinka aan la aqoon”. ^ - ^
Sep 24, 2013 at 2: 16 AM
Liiska weyn. Intaa ku dar, sidoo kale waxaan isticmaalayaa sawirro qurux badan oo ku yaal bogaggeyga waxaanan kula wadaagayaa Pinterest, Facebook, Instagram oo ku xira boggeyga. Abuuritaanka nooc bandhig ah oo ku saabsan waxyaabaha aan ka kooban yahay oo aan kula wadaago SlideShare.net, Scribd iyo bogagga kale ee faylasha lagu wadaago ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya kobcinta dhagaystayaashayda iyo taraafikada.